Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatokely-Ambanitsena : Dibo-drano noho ny fanotorana tany tsy ara-dalàna
Mbola manaporofo ity tranga ity fa anisany tena mahatonga ny tanàna iray dibo-drano ny fanotorana tany tsy ara-dalàna. Miantso vonjy amin’ny fanjakana foibe ireo mponina ao amin’ny fokontanin’Ambatokely, kaominina Ambanintsena, distrikan’i Manjakandriana satria dibo-drano ny tanànan’izy ireo noho ny nafitsoky ny ramatoa mpanambola iray. Nototofan’io olona io tany mantsy ny lakan-drano mandalo ao an-toerana ka dibo-drano tanteraka ny fokontany taorian’ny orambe nikija teto amin’ny Faritra Analamanga, ny alatsinainy lasa teo. Vokany, tranon’olontsotra roa no nirodana, todra-drano ny tanimbary, ny saha fambolen’ny mponina, ary trano sy fiara maro no dibo-drano.
Marihana fa nividy tany manamorona an’ilay lakan-drano io ramatoa mpanambola io ary nananganany fotodrafitrasa lehibe teo amboniny. Ny zava-misy anefa dia tsy nionona tamin’ny tany novidiany ity ramatoa ity fa nototofana hatramin’ny lakan-drano izay voaràran’ny lalàna velona sy manan-kery eto amin’ny firenena. Ny injeniera nampiasain’ity mpanambola ity rehefa nototofana ilay lakan-drano dia efa nilaza fa mety ho zava-doza noho hiseho rehefa misy orambe, saingy tsy te hahalala izany ramatoa. Taorian’izay dia nanantona ny manam-pahefana ao an-toerana (sefo fokontany, ben’ny tanàna) ny solontenan’ny mponina kanefa tsy nisy vokany izany fa nampiesonina sy narirarira fotsiny izy ireo.
Mazava ho azy fa nandray vola tamin’io mpanambola nanototra lakan-drano io ny manam-pahefana matoa tsy mandray andraikitra fa mitaza-potsiny izany tsy fanarahan-dalàna miharihary izany, raha ny nambaran’ny solontenan’ny mponina ao Ambatokely. Nilaza ihany koa izy ireo fa raha mbola misy ny orambe dia ho dibo-drano hatramin’ny lalam-pirenena faha-2. Andrasana noho izany ny andraikitra ho raisin’ny fitondram-panjakana satria mibaribary ny resaka kolikoly amin’ity raharaha ao amin’ny kaominina Ambanitsena ity.